Aung.Info | စာဖတ်သူ၏ ပေးစာများ
ဤ ဘလော့ဂ် စီစဉ် တင်ဆက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ စာဖတ်သူများမှ ဝေဖန် အကြံပေးစာများ၊ တုန့်ပြန်ချက်များကို အောက်တွင် မှတ်ချက် ရေးသွင်းပေးပါရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ ရေးသွင်းလာသည့် စာများ အပေါ်တွင် တစ်ဦးချင်း စာမပြန်နိုင်ခဲ့ပါလျှင်လည်း၊ ရေးသွင်းသည့် အကြောင်းအရာများကို ဤ ဘလော့ဂ် စီစဉ်သူများက အလေးထားပြီး မှတ်သား စဉ်းစားပါမည်ကို သိစေအပ်ပါသည်။
07/Oct/2016 at 2:37 am
Can you publish in pdf format and link to download for your stories? Also, can you make “Thai Ka Chae Thel” series like “1 to 10” “2 to 20” etc. to pdf and link for download will be nice for readers. If you do not want to post it on the web then, will you send me the pdf to email instead? Like Burmese Classic books site, you can able to download and read anywhere anytime without internet .
Just an idea for your stories I have for you. If you can do this, that is great and really appreciated.